Ngabe ama-prunes azosilungela isifo sikashukela? > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukulimaza Nezinzuzo Zama-Prunes kwisifo Sikashukela
Amaplamu omisiwe noma, ngokumane nje, ama-prunes - lo ngumkhiqizo onjalo, ukusetshenziswa kwawo akuvunyelwe njalo kwabanesifo sikashukela. Kungakho, ngaphambi kokuyisebenzisa, kufanele uthinte uchwepheshe. Uzokutshela uma lokhu kuvunyelwe ngoshukela omningi, ukuthi ngabe kukhona amathuba okuthuthuka kwezinkinga, nokuthi yini inkomba ye-glycemic prunes.
Ingabe induna ilungele abanesifo sikashukela?
Ezinye izazi zesifo sikashukela aziqinisekile ukuthi ama-prunes angumkhiqizo odinga iziguli ezinesifo sikashukela. Kodwa-ke, iningi lochwepheshe alizikhiphi izinzuzo zalo mkhiqizo, ngomkhawulo kuphela wokuthi ukusetshenziswa kwesifo sikashukela akufanele kwenziwe ngamanani amakhulu kakhulu. Ekhuluma ngezakhiwo eziwusizo, naka:
okuqukethwe okuphansi kwekhalori
amandla okwenza uhlelo lokugaya lube ngokwejwayelekile,
ukuhlinzeka ngomphumela we-antibacterial,
ukuba khona kwama-antioxidants emkhiqizweni, okubalulekile ekugcineni umsebenzi omuhle wempilo uma ubhekene nesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, akufanele sikhohlwe ngokungafakwa kwesibalo sokwenyuka ushukela wegazi, ukulwa nanoma yiziphi izifo ezisefomeni engapheli. Ekhuluma ngokuba khona kwezinto ezithile, kuyadingeka ukuthi unake ubukhona be-fiber, i-trace element, phakathi kwayo kukhona i-potassium, i-iron, i-phosphorus kanye ne-sodium.
Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, ama-prunes nawo alusizo ngenxa yokuba khona kwamavithamini A, B, C, no-E Ukuqanjwa kwawo kuzonikeza namanye ama-organic acids amahle kakhulu. Ngokuvamile, ama-prunes anomthelela omuhle emzimbeni womuntu, hhayi ngesifo sikashukela kuphela, kodwa futhi nakwezempilo.
Yingakho kungenzeka futhi kufanelekile ukuyisebenzisa, kodwa kumele kwenziwe ngokuya ngemithetho ethile, kucatshangelwa inkomba ye-glycemic (amayunithi angama-25 ngaphandle kwamatshe) nezinye izindlela.
Ungawadla kanjani ama-plums omisiwe?
Ngakho-ke, umthetho wokuqala, ochwepheshe babiza ukungafakwa kokusetshenziswa kwama-prunes ngamanani angenamkhawulo. Lapho kukhona isifo sikashukela, kuzokwazi ukusidla ngokulinganayo. Ukukhuluma ngalokhu, kusho ukuthi ukungadli izithelo ezingaphezu kwezimbili kuya kwezintathu kungakapheli amahora angama-24. Kufanele futhi kukhunjulwe ukuthi kungcono ukusebenzisa lezi zithelo hhayi ngendlela yazo emsulwa, kepha njengengxenye yezitsha eziphambili, ama-dessert.
Esikhathini sikashukela, ama-prunes nawo anconywa ukuthi agcinwe ngendlela ekhethekile. Ikakhulu, kungcono ukukwenza lokhu isikhathi esingadluli izinyanga eziyisithupha, ngoba umkhiqizo ungahle ube mubi. Kukhona eminye imiqondo edingeka ukuyikhumbula:
ukuqhwa kwezithelo akunamthelela kwizimpawu zabo ezizuzisayo,
Kunconywa ukuthi ungasebenzisi ama-plums omisiwe esiswini esingenalutho, nangaphambi kokulala,
futhi akufanele ihlanganiswe nezithako ezingadala ukugaya, ngokwesibonelo, nobisi.
Ukuvunyelwa kokusebenzisa ama-prunes kwesifo sikashukela sohlobo 2 akungabazeki. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi iziguli zikwenze lokhu ngendlela ejwayelekile, khumbula ngenhlanganisela evumelekile. Okunye ukufisa kufanele kubhekwe njengokusetshenziswa komkhiqizo njengengxenye yezindlela ezithile zokupheka.
Prune sikashukela: zokupheka eziyisisekelo
Kunezindlela eziningi zokupheka ezibandakanya ukusetshenziswa kwama-prunes. Ngikhuluma ngalokhu, ngithanda ukudonsela ukunakekela kuma-salads, kuma-jams nakwizinkomba ezinenkomba yokugcina ngokulingana ye-glycemic, engasetshenziswa sikashukela.
Uhlobo 2 no-1 sikashukela okuyisifo lapho amasaladi ngokufakwa kwama-plums omisiwe angahle adliwe. Ngenhloso yokulungiselela kwawo, kunconyelwa kakhulu ukusebenzisa inkukhu ebilisiwe, iyogathi enamafutha amancane, iqanda elilodwa elibilisiwe. Futhi ohlwini lwezithako kukhona ukhukhamba omusha omusha, amahlumela amabili noma amathathu nesinaphi.
Kunconywa ukusika umkhiqizo ngamunye ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Ngemuva kwalokho zibekiwe zingqimba, kubaluleke kakhulu ukulandela ukulandelana, okungukuthi, ukubeka kuqala uhlaka, bese ukhukhamba, iqanda nehlumela. Kunoma yiluphi uhlobo lwesifo esichaziwe, ungqimba ngamunye ufakwa ngengxube yeyogathi nesinaphi. Okulandelayo, isitsha sibekwa esiqandisini amahora amabili kuya kwamathathu, lapho simanzi. Isaladi lingadliwa kaninginingi phakathi nosuku, kepha ngezingxenye ezincane.
Ekhuluma ngama-prun ngale ndlela, kunconyelwa ukuthi ungasebenzisi isitsha ngaphezu kwesikhathi ngasinye ezinsukwini eziyisikhombisa noma ngisho eziyi-10. Kulokhu ukuthi lesi sifo sikashukela sizonxephezelwa ngokuphelele, asihambisani nama-glucose egazini.
Ukulungiselela izinto zokusebenzisa ujamu zokudla ezifana namaplamu omisiwe kanye nolamula (uhlala une-zest). Ekhuluma ngezici zokupheka, naka iqiniso lokuthi:
amathambo akhishwa ezingxenyeni ezitholakalayo, futhi imikhiqizo inqunywa kahle ngangokunokwenzeka,
emva kwalokho, amahlumela nge-ulamula abekwa esitsheni esivele sikhona futhi sigcwaliswe ngamanzi,
engeza ngokulandelana i-sweetener noma, ngokwesibonelo, uju wemvelo,
ubilise ukwakheka kunconywa ngokuqinile kuze kube yilapho isisindo esikhulu se-homogenible esivunyelwe ukusebenzisa ishukela lapho kukhona uhlobo lwesifo sokuqala nolwesibili.
Lapho-ke ujamu uyaphola futhi ungabhekwa ukuthi ulungele ukudliwa. Sebenzisa it Kunconywa kakhulu akukho ngaphezu kwesikhathi esisodwa phakathi nosuku. Gcina ukwakheka kwama-prunes ngendlela efanele endaweni epholile, hhayi ngaphezu kwezinyanga ezimbalwa zilandelana. Ukufaka esikhundleni selamula nezinye izithelo zomawolintshi akunconywa.
Izinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zemenyu yansuku zonke izoba iphunga elimnandi, elihlwabusayo nelinempilo. Ngokulungiselela kwayo sebenzisa i-200 gr. amabhilikosi omisiwe, 100 gr. ama-prunes, cishe amalitha ayi-2,5 amanzi ahlanziwe, kanye noju. Ngaphambi kokupheka, izithako zithelwa ngamanzi cishe imizuzu eyi-10, emva kwalokho zigezwa ngamanzi agobhozayo, zisikwe futhi ziphinde zifakwe esitsheni samanzi.
Isitsha sibekwa emlilweni omncane, bese kuthi ngemuva kokubilisa usebenzise uju, mhlawumbe ngenani elincane kanye negama lemvelo ngokukhethekile. Ngemuva kwalokho, umlilo uncishiswa ngisho nangaphezulu, ubilise isisindo imizuzu emihlanu. Kusukela ngesikhathi sokupholisa, i-compote ingu-100% evunyelwe ukusetshenziswa. Esikhundleni sama-apricots omisiwe, abanye bakhetha ukusebenzisa omisiwe, kepha ngalesi sikhathi kuhlakaniphile ukubonana nochwepheshe.
I-Compote akufanele igcinwe isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa, ngoba iyasiza ngendlela entsha. Kuyinto engathandeki ukuyiqeda, kanye nokuyishisa kabusha kuze kube ukubila.
Ukulinganiselwa kwesifo sikashukela
Umkhawulo oyinhloko, yiqiniso, izinga lokungakubekezeleli komkhiqizo owethulwe. Okulandelayo, naka ukusabela komzimba okuvela kwizithelo ezomile. Ngaphezu kwalokho, akukho esimweni lapho kufanele sikhohlwe khona ukuthi kuzodingeka wenqabe umkhiqizo owethulwe uma kungenzeka ukukhuluphala.
Naphezu kweqiniso lokuthi ama-prunes abonakala ngezimpawu eziningi ezinhle, ukusetshenziswa kwawo akwamukeleki ukufaka i-lactating abesifazane. Lokhu kungenxa yokuthi ingane ingaba nesisu esidabukisayo. Kuyinto engathandeki futhi ukusebenzisa amaplamu omisiwe ekunxephezeleni inkinga kashukela, ngoba akuvamile kakhulu, kodwa kusenokwenzeka ukwandisa ushukela wegazi. Kungakho kuqakathekile ukuqapha ngokucophelela lokho esikudlayo.
Kungenzeka ukuthi izihlahla zemvelo zikashukela?
Lo mkhiqizo ungabhekwa njengowusizo futhi ngasikhathi sinye ulimaze, ongabeki eceleni ithuba lokuwufaka ekudleni. Ukuqonda izimfanelo eziphikisanayo zama-prunes, kuyafaneleka ukwazi ngokuningiliziwe ukwakheka kwawo. Ngakho-ke, iqukethe kakhulu izakhi ezibalulekileezidingekayo kwabanesifo sikashukela:
amavithamini B, C, E,
i-iron, i-sodium ne-phosphorus,
i-fiber yokudla (i-fiber),
Ngenxa yalezi zingxenye, ama-prunes anezici eziningi ezithinta kahle isimo somzimba womuntu:
I-immunomodulator yemvelo ngenxa yesenzo se-antioxidant esiqinisa amasosha omzimba.
Ukuba khona kwe-fiber kusebenza inqubo yokusetshenziswa kwamafutha ngenxa yomsebenzi we-motor wokudla kwefayibha.
I-Laxative ngaphandle kwemiphumela emibi emibi, enomthelela ekunciphiseni isisindo, ngenxa yokuqukethwe kwe-sorbitol ne-diphenylisatin.
Ukusekela izinga lensimbi egazini.
Ukuqinisa uhlelo lwenhliziyo.
Ukuqiniswa kwesilinganiso samanzi nosawoti, ukuvimbela i-edema.
Onamandla okubulala izinhlungu.
Umphumela onenzuzo ekusebenzeni kobuchopho.
Isizathu esikhulu sokweqa umthetho ukuphakama kwe-fructose. Odokotela abaningi besaba ukuvumela abanesifo sikashukela, bobabili І, kanye no-ІІ ukuba bayisebenzise. Noma kunjalo, uma siqhathanisa lesi sizathu ne-arsenal yezimfanelo ezinhle, kuzocaca ukuthi kungani ama-prunes engasafakwanga ohlwini lwemikhiqizo evinjelwe ushukela.
Imiphumela ye-prunes emzimbeni
Amapulamu omisiwe aqukethe i-potassium, ngenxa yokuthi uhlelo lwezinzwa lubuyela kokujwayelekile, umsebenzi womsipha wenhliziyo uzinze.
Umkhiqizo ukuvikela okunamandla kwamangqamuzana kuma-radicals wamahhala, ngenxa yokuqukethwe kwe-beta-carotene ne-Vitamin E. Kunomphumela onenzuzo esikhunjeni, okuthi ikakhulukazi kushukela sikashukela sidinga ukuxhaswa.
Ukwakha izicubu zamathambo, udinga umkhiqizo wezitshalo - i-boron. Ngokubambisana ne-calcium ne-vithamini D, kubandakanyeka enqubweni yokulondolozwa kwamathambo namazinyo ezingeni elifanele. I-Boron iyadingeka futhi ezinkingeni zokuqina kwegazi, ezibonakala kushukela.
Kukhona isondlo esisezingeni elijwayelekile le-hemoglobin ngenxa yezinto eziqukethe i-iron.
I-selenium eyivelakancane, kanye ne-zinc, inomphumela omuhle esimweni sezikhonkwane nezinwele, okuvame ukuba yisifo sikashukela.
Ama-Prunes aqukethe ithusi, onomphumela omuhle ekufakweni kwensimbi.
Ama-Organic acid ahlinzeka ngokwejwayelekile kwe-peristalsis ye-mucosa yamathumbu, ukubhujiswa kwamagciwane we-pathogenic, kanye nokuxhaswa kwebhalansi ye-acid-base.
Zonke lezi zimfanelo ezinhle akusho ukuthi okukhona ukuzidla, kungcono. Kungenxa yokugxila okukhulu kwazo zonke izinto eziwusizo, ukusetshenziswa kwayo ngokweqile kungaholela ezinkingeni ezinjalo:
Ukwanda ukwakheka kwegesi, okubangela ukungaphatheki kahle kuphela, kepha nobuhlungu.
Isifo sohudo Ngokusetshenziswa ngokweqile, umphumela we-laxative ungabangelwa, ozoholela ekuphepheni komzimba. Kwesinye isikhathi kuthatha ifomu elingamahlalakhona.
Ukuncika komzimba Impahla e-laxative yomkhiqizo ingaholela ekuthembekeni kwendlela yokugaya ukudla kuma-prunes, ngaphandle kwawo kube nokwehluleka ekukhuthazeni ukudla.
Kanye nezakhiwo eziningi ezisebenzayo, ama-prunes angumkhiqizo ogama ukusetshenziswa kwalo kudinga ukubonisana nokuvunyelwa udokotela.
Ama-Prunes wesifo sikashukela sohlobo 2
Ngesifo sikashukela, kudalwa izidakamizwa ezinganciphisa kakhulu okuqukethwe kwensimbi, okwenza buthaka kakhulu umzimba. Kulokhu, usebenzisa ama-prunes ezingxenyeni ezilinganiselwe, ungakunxephezela ukulahleka kwawo. Kwejwayelekile izinga le-hemoglobin futhi kuthuthukisa ukuhamba kwe-oxygen emangqamuzaneni.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo II i-mellitus, amafomu e-edema ezicutshini ezithambile, kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa kungaholela ekuphepheni komzimba. Futhi lapha lesi sithelo esomile singaba nomphumela wokonga ngenxa yokuqukethwe kwawo okuphezulu kwe-potassium.
Ukuqinisekisa izinzuzo ukusetshenziswa komkhiqizo okukhulunywa ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo II:
ukulungiswa kwengcindezi yegazi (kuncishisiwe ukuphakama),
Ukuvimbela isifo se-gallstone nokwakhiwa kwamatshe ezinso,
ukukhulula umzimba wobuthi nezinsimbi eziyingozi,
ukulondolozwa kwephimbo lomzimba,
Ungayisebenzisa kanjani i-prunes kuma-diabetes?
Ukugcina isimo esikhethekile sokudla nesifo sikashukela kubalulekile njengokuthatha umuthi. Ukudla ngenyama kuyingxenye ebalulekile yendlela yesifo sikashukela. Ngokuqondene nama-prunes, inqobo nje uma kunenqwaba yezinto eziningi ezisebenzayo, amaplamu omile angama-2-3 kuphela avumelekile ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ungazidli zonke ngasikhathi sinye.
Ngemuva kokufaka izithelo ezomisiwe ngamanzi abilayo, kufanele zisikwe zibe yizicucu eziningana futhi zengezwe kusaladi, okusanhlamvu nakwezinye izitsha (uma zifunwa futhi zinambitha). Uma usebenzisa ama-prunes njengesithako kuma-casseroles nakwezinye izitsha ezishisayo, umthwalo wawo we-carbohydrate uncishiswe kakhulu.
Uma onesifo sikashukela enenkinga yesitulo, ama-prunes angadliwa ngendlela emsulwa ihora ngaphambi kokulala. Awukho umhluzi omnandi futhi ongasho lutho kulo mkhiqizo, ugcina zonke izakhiwo ezinhle, futhi uheha ngephunga lawo elihlukile.
Ama-Prunes ngamanani akhawulelwe awagunyazwa nje ukuthi asetshenziswe, kepha anconywe njengendlela yokuvuselela i-metabolic nezinye izinqubo ezigulini ezinesifo sohlobo lwe-I nohlobo II.
I-Protein Glycemic Index
Inkomba ye-glycemic iyinkomba yejubane lapho umkhiqizo uthinta amazinga kashukela. Isisekelo sithathwa amayunithi ayikhulu ngesilinganiso esikhulu. Le nkomba ithathwa emazingeni aphezulu kashukela.
Njengoba wazi, ukusetshenziswa kokudla okunenani le-GI eliphezulu kuholela eqinisweni lokuthi umzimba uthola amandla angafuneki, aphenduka abe ngamafutha. Futhi njengoba ngesifo sikashukela umsebenzi wamanyikwe usuvele ukhubazekile, isimo sesiguli siyanda.
Kunemikhiqizo enezimpawu eziphakeme (ezisuka ku-100 kuye kwezingama-70), eziphakathi nendawo (kusuka kuma-70 kuye kwangama-40) nezisho eziphansi (kusuka ku-40 kuye ku-10). Kumapula I-GI ingu-29. Lokhu kusho ukuthi ama-prunes anikela ngamandla awo ngokuhamba kancane. Ushukela oqukethwe kuwo ungena emzimbeni kancane kancane bese udliwa ngokushesha ngaphandle kokuzila ngaphakathi kuwo, okungathinti ukwanda koshukela wegazi.
Inkomba ephansi ye-GI ikhuthaza ukubopha kwe-cholesterol nokususwa kwayo emzimbeni, okusiza kakhulu isimo sesifo sikashukela.
Isilinganiso se-GI kuya inani lama-carbohydrate nge-100 g ye-prune ikuvumela ukubala umthwalo we-glycemic (GN). Le nkomba izokwazisa ukuthi ingakanani i-carbohydrate ethwelwe ngumzimba.
Kunamazinga amathathu we-GN:
ngaphansi - ngaphansi kuka-11,
isilinganiso - 11-19,
phezulu - ngaphezulu kwe-20.
Umthwalo we-Glycemic ungabalwa usebenzisa ifomula elandelayo:
I-GN = (inani lama-carbohydrate nge-100 g) / 100 × GI
I-GI yama-prunes - 29. Ku-100 g yomkhiqizo - 65,5 g wama-carbohydrate. Lokhu kusho ukuthi ama-29% kuphela lawo amunca umzimba:
65.5 / 100 x 29 = 19 (amagremu)
Isiphetho sisobala: ama-prunes ane-GN ephakathi, ngakho-ke kungumkhiqizo okudingeka uwasebenzise ngokulinganisa.
Ama-Prunes ithandwa futhi athandwa ngumkhiqizo omningi, onezimpawu ezihlukile, ngakho-ke kuyingxoxo yezingxoxo ezindabeni zokusebenzisa. Kuhle ukuqaphela ukuthi izakhiwo zayo ezinenzuzo azinakuphikwa. Into esemqoka ukuhambisana nesilinganiso, ikakhulukazi kubantu abanesifo sikashukela.